Satashikhabar.com सेवाग्राहीलाई ३० मिनेटमा सेवा प्रदान गर्नेछु - दलकुमार शेर्मा - satashikhabar.com
सेवाग्राहीलाई ३० मिनेटमा सेवा प्रदान गर्नेछु – दलकुमार शेर्मा
दलकुमार शेर्मा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च÷संघीय लिम्बूवान प्रान्तीय मञ्च नेपाल शिवसताक्षी वडा नं. ८ को तर्फबाट वडा अध्यक्षको प्रत्यासी उम्मेद्वार हुन् । उनी समाजमा राम्रो छाप छाडेका व्यक्तित्वमा दरिन्छन् । २०४६ सालको जनआन्दोलन यता पहिचानको मुद्दालाई शिरमा राखेर वैचारिक आन्दोलनमा उत्रिएका शेर्मा लिम्बूवान प्राप्तिको लडाईमा तल्लो स्तरबाट अग्रपंक्तिमा देखिन्छन् । पार्टी भन्दा बढी समाज सेवामा लागिरहने शेर्मा शिवसताक्षी वडा नं. ८ का आशाका केन्द्रबिन्दु हुन् । धार्मिक तथा सामाजिक व्यक्तित्व शेर्मा चुलाचुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष समेत हुन् । स्थानीय निर्वाचनको प्रतिष्पर्धामा उनले अवलम्बन गरेका दल लिम्बूवान र नेकपा एकीकृत समाजवादीस“ग चुनावी गठबन्धनमा छन् । समाज सेवाबाट वडामा परिचित शेर्मा जनप्रिय भएकाले जितको नजिक देखिन्छन् । अहिले उनी वडावासीको घरदैलोमा मत माग्दै पुगिरहेका छन् । यही“ निर्वाचनको सेरोफेरोमा सतासीखबर डटकमले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश तल प्रस्तुत छन् ।
वडा नं. ८ मा तपाईको अवस्था कस्तो छ ?
— म यस वडाको रैथाने वासिन्दा हुँ, शिवसताक्षी ८ भौगोलिक हिसावले पनि घना वस्ती भएको वडा हो । वाडावासीको प्रत्येक घरमा पुगिरहदा वडावासीहरु म प्रति आशावादी देखिएका छन् । म वडावासीहरुप्रति जवाफदेयिताका साथ लागिरहेको छु । त्यसैले मेरो अवस्था यो वडामा राम्रो देखिएको छ ।
वडा नं. ८ जित्ने आधारहरु के के छन् ?
— आसन्न बैशाख ३० गते सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि अहिले म घरदैलो कार्यक्रममा छु । मेरो जित्ने आधारहरु भनेको मुख्यतय वडावासीहरुको विश्वास हो । विश्वासका साथ वडावासीले मतदान गर्नेछन् । यो उमेरसम्म आइपुग्दा समाज र जनतालाई गरेको सेवाको निरन्तरता जनता र समाजसँगको प्रत्येक्ष सम्बन्ध, दुःख सुखको साथी बनिआएकोले पनि मैले जित्ने आधारहरु थुपै्र छन् ।
त्र शिवसताक्षी ८ मा तपाईको जित भयो भने लिम्बूवानको मुद्दा उठ्न सक्छ ?
— अत्यन्तै गम्भिर प्रश्न गर्नुभयो, मैले निर्वाचन जिते भने भन्दा पनि जित्छु नै भन्ने लागेको छ । मेरो जित भएको खण्डमा मुख्यतय वडावासीलाई सहज र सुलभमा अधिकतम सेवा पु¥याउने हो । स्थानीय निकाय, संघ, प्रदेशबाट, प्रत्यायोजित अधिकारलाई प्रशासनिक, प्राविधिक व्यवस्थापकीय माध्यमबाट सेवा प्रदान गर्ने हो । यसको अलवा नेपाल, राष्ट्र राष्ट्रियताभित्र पर्ने लिम्बूवान भूमि राष्ट्रि पहिचानहरु साथै पार्टीले उठान गरेको सह–अस्तित्ववादको सिद्धान्तलाई जनतामाझ बुझाउने सातक्षत्कार गराउने पनि रहन्छ । संघीय लिम्बूवान राष्ट्रिय मञ्चले अगाडी सारेको मुद्दाहरुलाई स्थापित गर्ने रणनैतिक आन्दोलनले पार्टीको मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन गर्ने वा कुनै मुद्दा उठ्नेमा निर्भर रहन्छ । जनप्रतिनिधिको अवस्थामा भने प्रत्यक्ष सेवाबाट नै मुद्दाहरुको महत्व जनतामाझ जाने हो ।
तपाईको वडामा कस्ता भावी योजनाहरु रहेका छन् ?
— मेरो वडाका भावी योजनाहरु सुनको भ¥याङबाट स्वर्ग जाने बाटो छैन । जनताको जीवनोस्तर जीवनशैलीसँग सरोकार राख्ने, जनतालाई सरल, सुलभ र सहज बनाउँने खालका भावी योजनाहरु छन् । केही राजनीतिक दलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, जेष्ट नागरिक, अपाङग, एकल महिलालाई राहत दिएको बताउछन् । तर त्यो राहत लिदा कति सास्ती खेप्नुपरेको छ । बैंकबाट भुक्नाती गर्छन्, कुनैपनि बैंक भुई तल्लामा छैन । जेष्ट नागरिक, अपाङग कसरी माथिल्लो तल्ला चढ्न सक्छ ? त्यो बढेसकालमा कस्तो सजाय हो ? कहिले घाममा, कहिले कोरोना महामारीमा । सेवा लिने प्रकृया नबुझेर जेष्ट नागरिकहरु दिनभर भोक तिर्खा नै बस्नु पर्ने अवस्था हुन्छ । म जितेर आएपछि त्यो घर पायक पु¥याएर सहज गरिदिने छु । जनताले सुलभ स्वास्थ्य सेवा नपाएर आर्थिक भार बोक्नु परेको अवस्था छ । वर्गिय वर्गिकरण गरेर कार्यालयबाट नै विमाको व्यवस्था गरिदिनेछु । मेरो वडा भरीका जेष्ट नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण घरमा गएर गरी आवश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछु । शान्ति सुरक्षाका लागि रहेक चौक चौकमा प्रहरी विट राख्नेछु । युवालाई प्रत्यक्ष उत्पादक बनाउन आवश्यक तालिको व्यवस्था गर्नेछु । स्वस्थ्य जनचेतना कार्यक्रम साथै जनसंख्याको आधारमा व्यायमशाला राख्नेछु । जेहेन्दार विद्यार्थीहरु छनौट गरी पुरस्कृत छात्रबृतिको व्यवस्था गर्नेछु । मापदण्ड पु¥याएर बनाएको बाटोमा अनिर्वाय ग्राभेल गर्नेछु । जनताका गुनासा सुन्ने निवेदन लेख्ने, फोटोकपी निःशुल्क गर्ने विभागको व्यवस्था गर्नेछु । नगरपालिकाबाट फोहोर मैला उठाउन मुख्य सडकखण्डका बजारमा मात्र हिड्ने भएकोले सबैको पहुँचमा पु¥याउने छु । वेरोजगार हटाउन वडाबाटै रोजगारीको सिर्जना गर्नेछु । सार्वजनिक सम्पत्ती विशेष जलकुण्ठहरुलाई व्यवस्थित गर्दै व्यसायिक कृषि पर्यटनतर्फ आकार्षित गर्दै स्थानीय स्रोत साधन परिचालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेछु । मेरो कार्यालयमा जनता सेवा लिन आएको ३० मिनेटभित्र सेवा प्रदान गर्नेछु साथै वडाको कुनैपनि कार्यक्रम जनताको छलफल र सहकार्यविना गर्ने छैन ।
वडा नं. ८ लाई कस्तो बनाउने तपाईको सोच रहेको छ ?
— मेरो वडालाई शिशवसताक्षी नगरपालिका, नेपालभरी नै त्यस्तो नमुना बनाउन चाहान्छु । त्यो नमुना वडा हेर्न कुनैपनि नेपाली नागरिकलाई इच्छा जागेर आओस् ।
शिवसताक्षी वडा नं. ८ मा तपाईको उम्मेद्वारी किन ?
— वडा नं. ८ मा मेरो उम्मेद्वारी कुनै रहरले होइन, अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरुको ज्यादती, अनियमितता, सुस्तता, जनतामा बोझिलो कर प्रणाली, पार्टीगत, नातावाद, अवसरवाद, असमानुपातिक विकास योजना देखेर नै मैले वडा अध्यक्षको उम्मेद्वारी दिएको हुँ । म ती सबै विकृति र विसंगतिलाई परास्त गर्न जोखिम मोलेर जनताको अभिमत लिने पक्षका साथ मेरो उम्मेद्वरी हो ।
तपाईको पार्टीको जनसंगठनको संयन्त्र कतिको चलायमान छ ?
— यस्तो हो, मेरो पार्टीको जनसंगठन संयन्त्र आवश्यक अनुसार नै चलायमान छ । कहिले बाफ पुन कहिले झरी हुने पानीको गुण जस्तै पार्टीको अन्दोलन निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार नै पार्टीको जन संगठनले काम गर्नेुपर्ने हुन्छ । आवश्यकता र परिस्थति अनुसार शक्ति सञ्चय, गतिशिलता निर्भर रहन्छ । चुनावमा भने अलिक विशिष्ट अवस्था हो, त्यसकारण मेरो वडाका आम जनताले पनि एकदमै साथ दिइरहनु भएको छ । त्यसमा म उहाँहरुप्रति एकदमै आभारी छु ।
तपाईले जित्ने सुनित्तिचतता के रहेको छ ?
— मैले जित्ने सुनिश्चितता भनेको यस्ता छन् ।
क) मेरा प्रतिस्पर्धा उम्मेद्वारहरु भनेका पार्टी दर्शन, विश्वास फेरिरहने छन् । उवाँहरुको राजनीतिक पृष्टभूमि हेर्ने हो भने कसैको ५ वर्ष लामो राजनीतिक लगाव अहिलेको पार्टीमा देखिदैन । म भने मेरो पार्टी स्थापना भएदेखि कार्यकर्ता हुँ, यो मानेमा जनताले मलाई उहाँहरु भन्दा धेरै विश्वास गर्नुहुन्छ ।
ख) मेरो जीवनको ७१ वसन्तसम्म कुनैपनि गैरजिम्मेवारी काम गरेको छैन । आर्थिक र नैतिक मालामाल कहिल्यै सम्झौता गर्दिन ।
ग) मेरो उम्मेद्वारी भनेको जनातको सेवाको संस्थागत निरन्तरता हो । मैले अहिलेको समयम्म व्यक्तिगत समय विताएको आफूलाई नै अनुभव छैन ।
घ) जनताको समस्यलाई ध्यान दिएर सुन्ने र यथाशिघ्र काम कारवाही गर्ने ।
ङ) म जनताको सेवक वा साहारा बन्न रुचाउँछु, अरुको तामझाम र नाटक हेर्दा तिनीहरु भोली जनताको सेवक बन्ने लक्षण देखिदैन ।
जनप्रतिनिधि नहुँदा समाजको लागि के काम गर्नुभएको छ ?
— मैलै जनप्रतिनिधि नहुँदा समाजका लागि नै सेवा गरेर समय व्यतित गरेको छु । जस्तो तत्कालिन समयमा जनप्रतिनिधि विहिनको अवस्थामा सर्वदलीय छलफल हुँदा सर्वसम्मतले साविक सतासीधाम गाविस वडा नं. १ को नागरिक मञ्चको संयोजकको रुपमा रहेर समाजको सेवा गरेको छु । साविक सतासीधाम गाविस वडा नं. १, २ र ३ को साझा वन चुुलाचुली सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा अधयक्ष रही काम गरेको छु । मेरो कार्यकालपछि अन्य राजनीतिक दलका साथीहरुले काम गरे तर संरचना थाङथिलो पारे । पुन त्यहाँका जनताले मलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गरियो । मेरो सेवाप्रति कुनै जनताको गुनासो छैन, विभिन्न मन्दिर, वाँध, जलकुण्डको अध्यक्ष भएर काम गरेको छु । सडक निर्माण, बाटो विस्तार लगायत संघ संस्थाहरुमा मैले गरेको सेवाप्रति कसैले प्रश्न गरेका छैनन् । त्यसैले मेरो अबको योजना भनेको साविक सतासीधाम गाविसको वडा १,२ र ३ मा पनि संरचनागत रुपमा जनताको प्रत्यक्ष सेवा गरेर असली र वास्तविक जनप्रतिनिधिको आभाष दिलाउनु छ जुन जनताको आफ्नो मतमा निर्भर रहन्छ ।
लिम्बूवानले निर्वाचनमा भाग नलिएको अनुभवहरु छन् ? त्यसले फाइदा ग¥यो कि बेफाइदा ?
— निश्चय नै हाम्रो पार्टीले गएको २०७० सालको निर्वाचनमा मात्र भाग नलिएको अनुभव छ । त्यो समय हाम्रो पार्टी संघीय लोकतान्त्रि राष्ट्रिय मञ्च नेपालले राज्यसँग गरको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न सडक आन्दोलनमा थियो । आन्दोलन र चुनाव लोकतन्त्रीय अभ्यास भएता पनि हाम्रो शक्ति सबै आन्दोलनमा समाहित थियो । त्यो आन्दोलनको बलले देश संघीयतामा गयो । तर पूर्ण संघीयता भने प्राप्त भएको छैन । त्यसको लागि आन्दोलनका विभिन्न स्वरुपहरुमा पार्टीले पनि काम गरिरहेको छ । तत्कालिन राज्यले गरेको बहुदलीय चुनावमा अहिलेका ठूला पार्टीले पनि भाग लिएका थिएनन् भने नगरपालिकाको चुनावमा पनि भाग नलिएको प्रर्याप्त दृश्तान्टहरु छन् । राजनीतिक पार्टीले त्यसलाई कसरी लिने भन्ने हो ।
तपाईको जितपछि तपाईबाट जनताले के को अपेक्षा गर्ने ?
— मेरो जितपछि जनताले म बाट समग्र वडाको व्यवस्थापन प्रशासनिक सेवा उत्पादन(सेवा, न्याय, बस्तु) र त्यसको वितरण साथै त्यसको दिर्घकालिन निरन्तरता, हराभारा स्वच्छ, वडाको अपेक्षा गरेमा फरक पर्दैन ।